5 Maitiro Ekutyaira Zvimwe Kudzokera Kuchikoro Kutengesa mu2019 | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 5, 2019 Muvhuro, Nyamavhuvhu 5, 2019 Douglas Karr
Kudzokera-ku-Chikoro ndiyo yechipiri huru mwaka wekutenga wegore uye nyika yedhijitari yave chikamu chakakosha chevatengi nzira-yekutenga.
Kudzokera Kuchikoro Kushandisa
Gore rino, the NRF inofungidzira kudzoka-kukoreji kushandisa wega kuchaita account ye zvinoshamisa $ 54.5 bhiriyoni.
Pamwe chete nek-12 kushandisa, kudzoka-kuchikoro kunotenga madhora anenge 80.7 bhiriyoni, pasi kubva pamadhora mazana masere makumi masere nemasere emadhora.
Mu2018, 23 muzana yemari yekudzokera-kuchikoro yakaitika online. Gore rino, 29 muzana yekutenga-kudzoka kuchikoro ichave iri online.
Muna 2018, k-12 vatengi vekuchikoro vakashandisa avhareji yemadhora mazana masere neshanu nemashanu pamhuri pazvinhu zvine chekuita nechikoro… tarisira mari iyoyo ku kuwedzera kusvika pamadhora 696.70 mari yechikoro pamhuri.
Mari yekudzokera kukoreji yakawedzera imwe $ 280 pamhuri yehuwandu hwe $ 976.78 mukushandisa zvine chekuita nekoreji pamhuri.
Sekureva kwaDeloitte, 57 muzana yek-12 kudzoka-kuchikoro-mari yaive muchitoro vs online online gore rapfuura. Gore rino, iyo nhamba inenge yakafanana, pa56 muzana.
Kunyange Moms vachiita zvimwe zvekutengesa, Vanababa ndivo kushandisa $ 115 yakawanda kutenga kuchikoro.
Iyi infographic kubva kuSherufu, Ese maStat Aunoda Kudzvanya Yako Kudzokera-Kuchikoro Campaign, inoratidza nzira shanu dzinogona kushambadzirwa nevashambadzi pakutenga kudzoka kuchikoro.
Nguva-yakatsimbirirwa vabereki vanovimba pasocial uye nhare yekutenga sarudzo, saka ive shuwa ku gadzirisa uye kuronga zvimwe zvipo zvikuru.
Funga nezve kumhanya New Beginnings mushandirapamwe wekupinda mukunzwa kwevabereki nezvevana vavo kutanga pachikoro chitsva kana kukoreji.
Bvunza vatsigiri vemakambani nevanokurudzira kuisa zvigadzirwa zvako mupositi izvo zvavari kutoshanda pazviri.
Partner na Amai Amai Blogger kuti ikubatsire kupinda pamberi pevatengi uye nekukupa iwe zvemukati-zvinogadzirwa zvemukati.
Vabereki vane vana vakawandisa vari kunyanya kutsvaga nzira dzekusevha, saka batanidza zvigadzirwa zvako uye boka rako zvibodzwa mumapakeji anodhura.
Heano akazara infographic nemamwe anoshamisa matsva data kune 2019 vatengesi uye e-commerce makambani:
Tags: 2019kudzokera kukorejikudzokera kuchikorokudzokera kuchikoro kunotengakudzokera-kuchikoro kushambadzirakudzokera-kuchikoro kutengesakushandisa-kudzoka kuchikoronongedzera mukati
20 Matipi Ekutyaira Akakodzera Trafiki kune Yako Yekutengesa Ratidza Booth